एक व्या’पारीले चन्द्रमामा आफ्नो दुई महिनाको छोरीको लागि किने जग्गा !
Homeसमाचारएक व्या’पारीले चन्द्रमामा आफ्नो दुई महिनाको छोरीको लागि किने जग्गा !
April 3, 2021 admin समाचार 5842
इन्दियाको सूरतको स’रथाणा इलाकामा वसोवास गर्ने विजय कथेरियाले आफ्नी दुई महिनाकी छोरीको लागि उप’हार स्वरुप चन्द्रमामा जमिन लिएका छन् । विजय शिशाको व्यापारी हो । उनले चन्द्रमामा जग्गा किन्नको लागि न्यूयोर्क इन्ट’रनेशनल लूनार लैंड रजिष्ट्री कम्पनीमा इमेल पठाएका थिए । कम्पनीले आवेदन स्वि’कार गरेको छ ।
विजय कथेरि’याको घरमा दुई महिना अघि छोरीले जन्म लिएकी थिईन् । छोरीको नाम नित्या राखिन् । छोरीको जन्मको समय’मा नै विजयले केही खास उपहार दिने वारे सोचेका थिए, जुन उपहार अरु भन्दा फरक होस् ।
विजय कथेरि’याले न्यूयोर्क इन्टरनेशनल लूनार लैंड रजिष्ट्रिी कम्पनीसँग सम्पर्क गरे र १३ मार्चमा चन्द्र’मामा जमिन किन्न अनलाईन आवेदन दिए । एक एकड भूमि किन्नको लागि दिएको आवेदन कम्पनीले स्विकार गरेको छ । त्यसपछि कम्प’नीले सवै कानुनी कारवाही पुरा गरे र विजय कथेरियाको जमिन किन्ने कुराको मन्जुरी भएको इमेल गरेको थियो । त्यस पछि कम्पनीले त्यो सम्वन्धि सवै का’गजात पठाएको थियो ।
विजय कथे’रिया नै चन्द्रमामा जमिन किन्ने पहिलो व्यापारी हो । नित्या शायद दुनियामा नै सवै भन्दा कम उमेरकी केटी हुन्, जसको नाममा चन्द्रमामा जमिन छ । मिस्टर पर्फेक्स’निष्ट’का उपनामले समेत चर्चित बलिउड अभिनेता आमिर खानकी छोरी इरा खानले चर्चामा आउनको लागि अने’कन ह’र्कत गरेकी छिन् । केही समय अगाडी मात्र इराले सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो सेयर गर्दै डिप्रे-शनको खुलासा गरेकी थिइन् ।
पछि फेरि आफ्नै बुबाको जिम ट्रेनरसँग प्रे’ममा रहेको खुलासा गरेको थिइन् । यस्तै फन्डा गर्ने क्रममा इराले जंगलमा केही फोटोसुट गरेकी छिन् । इन्स्टा’ग्राममा उनकाे ३ लाख ८१ हजार भन्दा बढी फ्लोअर्स भएकी इरालाई चर्चा कमाउनकै लागि अनेकन हर्कत गर्ने गरेको प्र’तिक्रया आउने गरेको छ ।
इरा आमिर खान र उनकी जेठी ‘श्रीमती रिना दत्ताकी सन्तान हुन् । आमिर र रीनाले सन् १९८६ मा विवाह गरेका थिए । इराबाहेक उनिह’रूका जुनैद नामका छोरा पनि छन् । सन् २००२ मा आमिर र रिनाको सम्बन्धविच्छेद भएकाे थियो । सन् २००५ मा आमिरले किरन रावसँग दो’स्रो विवाह गरे । इताजा खबरबाट
पल शाह प्रहरी हिरासत जानु अगाडी खेलेको बिष्णु माझीको गीत युटुबमा – हे’र्नुहोस्
April 15, 2022 admin समाचार 1054
नेपाली लोक संगी’तलाई निरन्तर अगाडी बढाउदै आएका अग्रज सर्जक तथा गायक पवन ओलीको लोक दोहोरी गीत ‘मुटु’मा माया छ’ बजारमा आएको छ।लोक’प्रिय गायिका बिष्णु माझी र कुलेन्द्र बिश्वकर्माले सुमधुर आ’वाज भरेको गीतमा लय तथा शब्द
April 11, 2021 admin समाचार 5561
April 15, 2021 admin समाचार 5201